ဉာဏ်အလင်း စက္ခုအာရုံများမှတဆင့် - ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝအတွက် ဗောဓိ တရားအားထုတ်ခြင်း
ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ဓာတ်ဖိုနှင့် ဓာတ်မတို့ကို ကြည့်ရှုပါ
အစဉ်အားဖြင့် အခြေအနေတစ်ခုတွင် အဖိုနှင့်အမ ဟူ၍ နှစ်ဖက်ရှိသည်ကို သတိပြုသင့်ပါသည်။ မည်သည့် အခြေအနေအတွက်မဆို ပင်ဆင်ထားနိုင်ရန် ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ဓာတ်ဖိုနှင့် ဓာတ်မအကြောင်းတို့ကို လေ့လာရန် လိုအပ်ပါသည်။ ခြားနားမှုအားဖြင့် မုသားစကားများမှ အမှန်တရားကို ပိုင်းခြားရန် (သို့) ဘယ် (သို့) ညာဘက်သို့ ချိုးကွေ့ရန် ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆန့်ကျင်ဘက် အခြေအနေများကို အစဉ်လေ့လာသုံးသပ်ကြပါ သည်။
အတွေးအခေါ်နှင့် အမှားအမှန် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ဘက်ညီမျှမှု .
အတွေးအခေါ်နှင့် အမှားအမှန် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ဘက်ညီမျှမှု
တရုတ်လူမျိုးတို့၏ ဒဿနတွင် ဓာတ်ဖိုနှင့် ဓာတ်မ နိယာမသည် အတွေးအခေါ်နှင့် ဆုံးဖြတ်များ ဟန်ချက် ညီမျှ စေရန် များစွာအသုံးဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပျော်ရွှင် မြူးထူးနေသည့် အခိုက်အတန့်တစ်ခုတွင် ရှိနေကြ သည့်အခါ အပျော်လွန်သွားခြင်း မရှိပါ၊ ထို့အတူ အခြေအနေများ ယုတ်လျော့သွားလျှင်လည်း လွန်စွာ ဝမ်းနည်းမည်မဟုတ်ပါ၊ ဝမ်းနည်းမှုသည် မည်သည့် အရာကိုမျှ ထမြောက်စေခြင်းမရှိသည့်အတွက် ဝမ်းမနည်း ပါနှင့်။.
အမြင့်လိုလျှင် အနိမ့်မှ စတင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အချိန်ကာလများတွင် အရာဝတ္ထုများသည် နိမ့်ဆင်းသွားသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း မဟုတ်ကြပါ။ ဤအချက် သည် သင်၏ နာက်တစ်ဆင့်အတွက် ကြားကာလတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ အပြေးပြိုင်ပွဲ တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ တောင်ကုန်းတစ်ခုကို ကျော်ဖြတ်ရန် အပြေးသမားသည် အမြဲတမ်း မနိမ့်နေရာတစ်ခုမှ စတင်ပြေးလွှားရမည် ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ဘဝ၏ ဒီရေ ကျသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျှင် မင့်မားသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ အမြင့်လိုလျှင် အနိမ့်မှ စတင်ရမည်ဖြစ်သည်။.
အခြေအနေကို မတူသည့် ရှုထောင့်မှ ကြည့်ရှုပါ
ထို့ကြောင့် မတူသည့်ရှုထောင့်များမှ အခြေအနေများကို ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။ ဉာဏ်နှင့်ယှဉ်သည့် သုံးသပ်မှု စိတ်အလျင် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အားပေးအားမြှောက်မှုမရှိခြင်း (သို့) အလွန်ဝမ်းသာခြင်း တို့ကဲ့သို့ စိတ်ခံစားချက် အတက်အကျများကို အလွယ်တကူဖြင့် တွေ့ကြုံရမည်မဟုတ်ပါ။ .
အလွန် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုနောက်တွင် ဝမ်းနည်းမှု အမြဲလိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ဤအချက်သည် နိယာမတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည် လောက၏ နိယာမဖြစ်သည်။ အဖိုနှင့် အမဓာတ်၏ နိယာမဖြစ် သည်။.